I-Jabra Elite 85t, phezulu kwekhwalithi yomsindo nokukhanselwa komsindo | Izindaba zegajethi
I-Jabra Elite 85t, phezulu kwekhwalithi yomsindo nokukhanselwa komsindo
UMiguel Hernandez | 04/07/2021 11:52 | Izipikha, General, Isithombe nomsindo, Izibuyekezo
Jabra yinkampani yomsindo ebilokhu ihamba nathi nemikhiqizo yazo zonke izidingo isikhathi eside, sincoma ukuthi ubheke kuzibuyekezo zethu zangaphambilini ukuthola umbono. Ngalesi sikhathi sizohlangana nomunye wemikhiqizo ye- "premium" kunazo zonke okwenziwe yiJabra kuze kube manje.
Ama-headphone kaJabra Elite 85t amelana nezinye izindlela ze-Apple nezakwaSony ngaphandle kobunzima. Thola nathi la maJabra Elite 85t kulokhu kuhlaziywa okujulile kwekhwalithi yabo yomsindo nokukhanselwa komsindo, uzoyikhumbula? Ngokuqinisekile akunjalo.
1 Idizayini nezinto zokwakha: Sense ngaphezu kwe-aesthetics
2 Ukuxhumana nokusetshenziswa
3 Ikhwalithi yomsindo
4 Ukukhanselwa komsindo nokuzimela
Idizayini nezinto zokwakha: Sense ngaphezu kwe-aesthetics
IJabra, yize ivelele ngamandla nekhwalithi yokuhlanganiswa kwemikhiqizo yayo, akusho ukuthi ibilokhu idume ngokuklanywa kobuhle obukhethekile. Lolu hlobo luphinda lubonakale kumaJabra Elite 85t, amahedfoni akude nokuba yinto yobuhle emakethe. Ngokuvamile zikhulu futhi ziwugqinsi, futhi aziveli ngokukhanya okukhulu. Kulokhu, sizamile uhlelo oluhlanganisa amathoni amnyama nethusi emininingwaneni eyinhloko. Kodwa-ke, konke kukalwa eJabra.
Amahedfoni: 23,2 x 18,6 x 16,2 mm
Icala: 64,8 x 41 x 28,2 mm
Amahedfoni: ama-6,9 amagremu lilinye
Icala: 43,7 amagremu lilinye
Umklamo wayo wenzelwe ukulingana ezindlebeni zethu futhi uphumule kuwo. Ngokuvamile, zikhululekile kubasebenzisi 'abangawala' ama-headphone asezindlebeni. Kodwa-ke, kufanele ngivume ukuthi angizizwa kahle ngalama-headphone ikakhulukazi, kepha bonke labo abakule ndlela, engeke ibe nomthelela omubi ekuhlaziyweni kwethu. Ngale ndlela, ngamafuphi, sifinyelela esiphethweni sokuthi lawa maJabra Elite 85t akuwona ama-headphone azokhanya ngokwakhiwa kwawo okumangazayo, kepha ngekhwalithi yabo yokwakha kanye ne-ergonomics.
Lezi IJabra Elite 85t unokuxhumana kwe-Bluetooth 5.0, okuzosisiza ukwenza ukuxhumana okuzenzakalelayo okungenazintambo ngokushesha nje lapho sibakhipha ecaleni. Kulesi sigaba, ukusebenza yilokho okungalindelwa enkampanini. Sine-codec yokudlulisa I-SBC yomculo ngefomethi "universalized" bese sidlulela ku I-AAC Okwe-Apple okwenzelwe lapho sisebenzisa iMac, i-iPhone noma i-iPad. Ngokufanayo, amahedfoni ahambelana kakhulu nazo zonke izinhlobo zamadivayisi.
Uhlelo lokusebenza lwe-iOS> LINK
Uhlelo lokusebenza lwe-Android> I-LINK
Uhlelo lokusebenza, esilivivinyile phambilini kokunye ukubuyekezwa, luhlanganisa impela. Nge-Jabra Sound +, etholakala kuzo zombili i-iOS ne-Android, uzokwazi ukwenza ngezifiso amapharamitha amaningi amahedfoni azokwenza isipiliyoni sakho siphelele. Lolu hlelo lokusebenza ngumngane ophelele ozosivumela ukuthi silungise amazinga amahlanu asebenzayo wokukhanselwa komsindo, kanye ne- I-HearTrhoug Ukunciphisa umsindo womoya, khetha umsizi wezwi, ithuba lokucinga ama-headphone ethu futhi ikakhulukazi izibuyekezo ziyatholakala App (kuvidiyo yethu ungayibona isebenza).
I-Los IJabra Elite 85t Umsebenzi owenziwe kahle ngokwama-headphone we-True Wireless (TWS), lapho sithola khona ukuphambana kweqiniso, akunjalo ekuhlaziyweni kwethu. Ihlala ezingeni elifanayo njengabo bonke abanye izimbangi zayo emakethe uma kukhulunywa ngohlu lwamanani, kunjalo, lokho kuncane okungalindelwa.
Okumaphakathi nokuphakeme: Sithola ukumelwa okuhle kwalolu hlobo lwamafrikhwensi, anekhono lokushintshana phakathi kokunye, ukuguquguquka kwamandla futhi ngaphezu kwakho konke ukuthembeka maqondana nomsindo okhishiwe. Amazwi abaculi ezivivinyweni zethu ne-Artic Monkeys noQueen akhiqizwe kahle.
Phansi: Kulokhu, uJabra kungenzeka ukuthi "ubengowokuhweba" ngokweqile ngokunikela ngama-bass athuthukiswe ngokumangazayo, kuyiqiniso ukuthi bayajatshulelwa kakhulu komunye umculo wamanje wezentengiselwano, kepha baya kude kakhulu kokuqukethwe lapho sishintshela edwaleni.
Kunoma ikuphi, leli phuzu elishiwo ngenhla lama-bass athuthukisiwe linganqotshwa ngokwenza ukulungisa kwi ukulinganisa wohlelo lokusebenza. Kulahlekile mhlawumbe ukuthi babekhethele umsindo okuthile "okufuna" kakhulu nge-aptX codec.
Ngokuqondene nezingcingo, Lawa mahedfoni akhombise ukukhula okuhle kokungenelela, sikuqinisekisile ukuthi akugcini nje ngokuzwa kahle, kepha nokuthi basizwa kahle, naphezu kwezimo zomoya nomsindo wangaphandle oxazululwa kahle.
Ukukhanselwa komsindo nokuzimela
Mayelana nokukhanselwa komsindo, kufanele kuqashelwe ukuthi ngikuthole kukuhle impela futhi mhlawumbe singakubeka phakathi kokukhanselwa kwemisindo emihlanu yamadivayisi we-True Wireless. Imodi ye-HearThrough Ihlangabezana nalokho okudingekayo, yize kuyiqiniso ukuthi ayifinyeleli ezingeni labancintisana nemodi ye-AirPods Pro-style "transparency", kepha iyayixazulula ngendlela ephawulekayo. Ukusetshenziswa okujwayelekile, ukukhanselwa komsindo wayo kungaphezu kokwanele futhi kufeza okungenani lokho okuthembisayo.
Ngokushaja okungenantambo kwe-Qi
Mayelana nokuzimela, inkampani isithembisa okungaphezulu koku ukudlala amahora amahlanu komculo iyaqhubeka uma kungenzeka sikhanselwe umsindo ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke, ukuzimela kuchazwa ngokuningi kakhulu kunalokho, ivolumu esikukhiqiza kabusha okuqukethwe izokwenza leli bhethri lihluke, futhi iqiniso ukuthi ezivivinyweni zethu sithole lawo mahora amahlanu athenjiswa nguJabra. Ukuze sibakhokhise ngokugcwele, sizodinga cishe ezimbili uma nje sikhokhisa ama-headphone ngaleli cala, ngenkathi ukushaja wonke amadivayisi kuthatha cishe imizuzu engama-40 ngaphezulu. Ngokwesici esichazayo sokuzimela iJabra 85t ingumkhiqizo ngaphezu kokwanele.
Lawa maJabra Elite 85t ongawathenga ku-Amazon kusuka kuma-euro angama-229 Kungumkhiqizo osebenza kahle kakhulu obheka ngqo emncintiswaneni. Banikeza abakuthembisayo, ngaphandle kokungabaza, kepha basenayo ukwengezwa kokuba umkhiqizo omuhle kakhulu, ongenza abanye abasebenzisi bacabange kabusha ukuthenga kwabo. Intengo iphezulu, kepha kunalokho ikhwalithi yomsindo muhle ngokwedlulele, kanye nokukhanselwa komsindo wayo.
Kuthunyelwe ku: 4 de julio de 2021
Ukulungiswa kokugcina: 4 de julio de 2021
Ikhwalithi yomsindo ekhangayo
Enye ye-ANC ehamba phambili emakethe
Idizayini enobungozi obuphansi
Ngikhumbula ukusekelwa okwengeziwe
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Jabra Elite 85t, phezulu kwekhwalithi yomsindo nokukhanselwa komsindo
Hamba uzolile kuleli hlobo ngemoto ngalesi sibuko sedashcam / sangemuva sokubuka